Ka Arapaja na-eduga PDP Southwest, nchegbu banyere Fayose gambit na-etolite.
Ọ bụ egwuregwu na-eche ndị na-ahụ maka ndị Democratic Democratic Party (PDP) na Southwest. Ha na-eche ịhụ ka onye osote onye isi ala a họpụtara ọhụrụ, onye nnochite anya Taofeek Arapaja, ga-esi na-achịkwa ihe omume nke mpaghara ahụ ka ọ na-aga maka ọgbakọ mba PDP na-abịanụ na nhoputa ndi ochichi n’afọ 2023.
Arapaja meriri onye isi oche mbụ nke National, Dr. Eddy Olafeso, na nnọkọ esemokwu zonal emere na Eprel 12, 2020, na Osogbo, Osun State. Agbanyeghị, enwere ajụjụ gbasara etu Arapaja ga-esi tinyekọta otu otu dị iche iche nwere mmasị ma gosipụta ya dịka otu ezinụlọ, na-emegide ihe mere na ọgbakọ mba December 2017. A kwaturu Southwest dị ka onye isi oche mba ahụ n'oge ahụ n'ihi esemokwu n'etiti ndị na-akwado ya.
Agbanyeghị, ọ bụ ezie na mmeri Olafeso meriri Arapaja juru ọtụtụ ndị na-enyocha ndọrọ ndọrọ ọchịchị anya, ụfọdụ ndị nwere nkụda mmụọ tụrụ anya na mmega ahụ ga-abụ nke 'ego' na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-aga n'ihu n'etiti Gọvanọ. Seyi MakindeNdị na-akwado ya na ndị ahụ bụbu gọvanọ steeti Ekiti, bụ Mazị. Ayodele Fayose.
O juru ha anya na Fayose gbanwere obi ya nabata oru Makinde dika onye isi ndi otu na mpaghara na oge ikpe azu. Kasị njọ, a na-atụ anya na ogige abụọ ahụ ga-enwe nzukọ ọgbakọ n'otu oge iji gosi ndị isi dị iche iche.
Ndị na-enwe obi abụọ na-enwe nkụda mmụọ na ọjụjụ Fayose jụrụ ịjụ mmeri Arapaja n'ụlọ ikpe na njikọ oge ikpeazụ ha na oku a na-anabata ịdị n'otu. Agbanyeghị, Kọmitii Na-ahụ Maka Ọrụ Ọchịchị nke PDP (NWC) na National Executive Council (NEC) nwere ike ịnye ọnọdụ nke onye isi oche mba na Southwest, ọkachasị ma ọ bụrụ na ndịda ọwụwa anyanwụ na-ekwusi ike na naanị akwụkwọ ikike onye isi na 2023.
Ọ ga-abụ na Fayose ga-abụrịrị onye nnabata iji mara nnabata Arapaja na onye ndu Makinde ga-abụ nkwado iji kwado nkwado ha maka mmasi ya na-enweghị ọkwa ịzọ ọkwa onye isi ala na mgbe ọ bụrụ na ọ ga-emecha zigara Southwest?
N’okwu ya n’oge na-adịbeghị anya, Chief Ebenezer Babatope, onye bụbu onye otu PDP Board of Trustees (BoT), kpughere na Southwest nwere ike ghara ịchọsi ike ịzọ ọkwa onyeisiala PDP na ntuli aka elu nke 2023. N'aka nke ọzọ, Babatope kwuru na ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ndị Yoruba ga-akwado onye ọbụla na-azọ ọchịchị si na mpaghara ọbụla nwere ihe ọ ga-ewe iji merie ọchịchị All Progressive Congress (APC).
Na mgbakwunye, ogige Fayose zutere ndị ọzọ na-eguzosi ike n’ihe n’izu a iji gbalịa iwulite ebe a ma ama ma mee ka ndị PDP bụrụ ndị a ma ama na Southwest, na-enweghị nkwekọrịta doro anya na ha na ndị isi zona na-eduzi Arapaja na-arụ ọrụ.
N’ozi ha bipụtara ka nzukọ a gasịrị, onye nkwuchiteọnụ otu ahụ, Maazị Lere Ndụ, kwuru na ndị ahụ metụtara ya, nke esitere na steeti isii ndịda ọdịda anyanwụ, kwupụtara nkwenye ha maka udo na ịdị n'otu na PDP ma gbaa ndị nwere nkụda mmụọ nọ n'ogige ahụ na-emegide aka ka ha mee otu ihe ahụ.
"Dịka ndị raara onwe ha nye na PDP, anyị emeela ihe ekwesịrị ime mgbe nnọkọ ahụ gasịrị site na ikele onye nnọchi anya Arapaja na ịgbatị aka ya na ya," ka nkwupụta ahụ kwuru.
"Anyị ekwenyela na nsonaazụ nzuko omeiwu, emezighị emezi na ihe niile, na onus dị ugbu a n'akụkụ nke ọzọ iji megharia ọrụ anyị."
“Otú ọ dị, anyị ga-adọrọ uche nke ndị isi otu ahụ gaa n’ọnọdụ ihere nke odeakwụkwọ Kọmitii Congress, Senator Samuel Anyanwu, onye na-ezoghị eziokwu ahụ na ọ nọ na kọmitii ahụ ịrụ ọrụ ọfụma ya.
“Anyị na-ama Senator Senator Anyanwu ikpe maka ịkpa oke agbụrụ ya n’oge ọgbakọ omebe iwu.
Na-enweghị iguzosi ike n’ezi ihe, ezi obi, na nkwenye siri ike nke osote Gọvanọ Benue Steeti, Engr. Benson Abounu, onye jere ozi dị ka Onye isi oche Kọmitii na nnọchite Gọvanọ Samuel Ortom, usoro a dum gaara abụ nke Anyanwu metọrọ nke ọma.
“Ọ bụ na ndekọ na Senator Anyanwu gbakwunyere vootu iri na onye mechara merie ugboro abụọ, ọ werekwa ịdị uchu nke ndị nọ ya iji gbazie ya mgbe a na-agụta votu maka agbụrụ onye isi oche.
“N’ihi nke a, anyị na-arịọ ndị otu ahụ ka ha debanye aha ya n'akwụkwọ (Anyanwu) ma zere itinye ya na ọrụ ndị nwere nsogbu, ọkachasị ndị ọgbakọ omebe iwu.
"Anyị na-ekelekwa gọvanọ mbụ Fayose maka nraranye na nkwụsi ike ya, ma na-agba ya ume ka ọ ghara ịlaghachi n'àjà ọ na-achụ maka udo na ịdị n'otu nke otu ahụ."
N’okwu ya na ọgbakọ ogbako ahụ, Fayose toro ndị metụtara ya, na-ekwu na ọ tụrụ ya n’anya na ha kwụdosiri ike na nkwado ha maka pati ahụ na-atụle nsonaazụ ọgbakọ ọgbakọ.
“E wedara m ala na ị nọ ebe a taa, n’agbanyeghi ihe mere n’Osogbo na Mọnde gara aga. A na-enwe ekele maka nraranye gị zuru oke na pati ahụ, anyị ga-aga n’ihu ime ihe achọrọ n’aka anyị dịka ndị isi maka ọdịmma kacha mma nke otu ahụ, “Fayose kwuru.
Ndị isi oche nke Ekiti, Ogun, Lagos, na Osun steeti, Otunba Bisi Kolawole, Dr. Sikirulai Ogundele, Engr Adedeji Doherty, na Hon Sunday Bisi, nọ na nzukọ ahụ, nke e mere na Lagos.
Ọ bịakwara ya bụ Olafeso, Reverend Bunmi Jenyo, Alhaji Adebisi Olopoeyan, Engr Femi Babalola, Alhaji Gani Olaoluwa, Prince Diran Odeyemi, Hon Saka Lawal, Chief Tunde Akindehin, Dr Lad Ojomo, Barrister (Oriakụ) Abimbola Lanre-Balogun, Hon Boye Ades
Ndị ọzọ gụnyere Hon Okunlade Michael, Hon Asipa Ismael, Ambassador Makinde Dada Akinlabi, Deacon Anthony Edwards, na Rufus Adeniyi.
Agbanyeghị, na mkparịta ụka ekwentị, Olalere kwuru na ihe kachasị mkpa ugbu a bụ ka ndị Southwest PDP mepụta njikọta ọnụ iji hụ otu ọ ga-esi nwee ike ịhazigharị ma wusie otu ahụ ike iji wee wepụ APC na nhoputa ndi ochichi na-esote.
O kwukwara na akabeghị aka ịmalite ikwurịta banyere mgbakọ mba ahụ n'ihi na isi ụlọ ọrụ mba ahụ edozighị na mpaghara a ga-ahazi mpaghara ọ bụla.
N'otu aka ahụ, Olafeso kwuru, "Nzuko a abatala; onye mmeri Arapaja gwara m okwu ihe dị ka nkeji abụọ mgbe ntuli aka ahụ gasịrị kelere ya na ndị Makinde. ” Agbanyeghị ụfọdụ emezighị emezi gosipụtara ọgbakọ omebe iwu ahụ, anyị nwere obi ọma na anyị kwere ha mmeri, mana enwere m olileanya, m kwusikwara ike na ha agaghị enwe obi ike karịa na ha nwere ike ime ihe na-adọkpụghị ogige ndị ọzọ esoro ha.
“Ihe kachasị mkpa maka anyị ugbu a bụ ịchọpụta etu anyị ga-esi merie APC na nhọpụta izugbe ọzọ; ma ọ bụghị ya, otu Nigeria si achịkwa gọọmentị dị ugbu a, enwere m obi abụọ na mba ahụ ga-adị ndụ, ma ya fọdụkwa òtù ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Anyị gakwuuru ha, na Tuesday, ogige Fayose zutere, anyị kwenyesiri ike na Southwest PDP na-anabata, ịdị n'otu, na nkwekọrịta n'agbanyeghị ihe ga-esi na nnọkọ ahụ.
"Anyị ka na-eche ka onye isi ndị Arapaja na-edu kpọtụrụ anyị ma gosipụta mmemme ya nke ihe omume, ka anyị wee nwee ike ịhazi etu esi etinye mpaghara ahụ iji were ihe ọ bụla mba ga-eme na nke anyị tupu mgbakọ mba ahụ."
Ka ọ dị ugbu a, Dr Adetokunbo Pearse, onye isi ndị otu si na Lagos na-eguzosi ike n'ihe nye obodo Makinde, dọrọ onye isi nke Arapaja aka na ntị ka ọ kpachara anya maka egbugbere ọnụ Fayose na-ekwe nkwa ịdị n'otu na udo ahụ mgbe ọgbakọ omebe iwu ahụ gasịrị.
Ndị kwuru na Fayose depụtachaara ya dị ka onye aghụghọ nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị ogologo oge gara aga, ka o kwuru, mgbe Fayose ji obi umeala kwuo okwu banyere udo na idozi na ọgbakọ ọgbakọ ahụ na Eprel 12. O kwusiri ike, "Fayose dị ka onye nwere ezi obi." O kwuru na ya matara Gọvanọ Makinde dịka onye isi na-enweghị mgbagha nke PDP na mpaghara ahụ ma kwe nkwa iso ya rụkọọ ọrụ iji melite ma jikọọ otu ahụ. Mana, dịka o siri pụta, Fayose na-egwu egwu na ebe ngosi ihe nkiri. N’ime awa ole na ole ka okwu udo ya gasịrị, ọ kpọsara agha, na-emebi nkwa ọ bụla o kwere na televishọn mba. Fayose laghachiri n’onwe ya. ”
Ọ na-azọrọ iwe Fayose nke Congress sitere n'okwu abụọ: otu, na mmejọ megidere Congress, na nke ọzọ, na emechiri ntuli aka ahụ, mana nkwupụta abụọ ahụ enweghị isi na enweghị isi, dị ka Pearse si kwuo.
Pearse gara n'ihu kwuo na ọgbakọ ọgbakọ agaala, na ndị isi ndịda ọdịda anyanwụ nke pati ahụ adịla njikere isoro Gọvanọ Makinde, onye isi otu mpaghara mpaghara ahụ rụọ ọrụ. Ọ bụ ọrụ ha jikọrọ aka ime ka ụlọ ọrụ ndị otu ahụ sie ike gburugburu mpaghara geopolitical ma kwalite obibi ndụ ụmụ amaala. Ka ha na-eme nke a, ha ga-atụnye ụtụ ha nhatanha na uto mba.
“Otú ọ dị, Gọvanọ Makinde na ndi otu Arapaja aghaghi iburu n’uche na barracuda ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-echere ha. Ayo Fayose ka nọ na-agbasaghị, na-anwa igbochi mbọ ha. Okwesiri ikwenye na ndi ndu a, tinyere otutu ndi ochichi nke PDP, maara ihe ndi Fayose na-eme. Mana nke a bụ arịrịọ maka ndị nwere ike ịghọta ekele ya ma ọ bụ nwee ọ enjoyụ na usoro mmụta ya: Lelee okwu na omume Fayose anya nke ọma; ọ bụrụ na ị mee, ị ga-ahụ nwoke na-arịa ọrịa na-achọ ọchịchị ọnwụ. Ekwela ka o dina gi soro ya ala ili. ”
Pearse kwuru na ọ bụrụ na mpaghara ahụ jikọọ aka ya ọnụ, ndị gọvanọ niile dị na South-South dị njikere inyere Southwest aka imepụta onye isi oche otu pati na ọgbakọ mba na-abịa.
"Enwere m ikike dị mma na ndị gọvanọ South-South enwekwaghị okwukwe na Onye isi ala na-achị ugbu a, Prince Uche Secondus, ma dị njikere inyere anyị aka imeri ọnọdụ ahụ," ka o kwuru. Fayose bụ isi okwu. Cheta na n'afọ 2017, onye chịburu Ekiti steeti na Olafeso rụrụ ọrụ megide anyị maka na ọ chọrọ ịzọ osote onyeisiala, nke na-agaghị ekwe omume n'oge ahụ. Makinde na Arapaja ga-amasị m ịkpachara anya. ”
Nchegbu maka ego nchekwa data anụ ụlọ April 24, 2021
Enweghị nchedo: Onye isi ala ugbu a bụ onye ọrụ na onye na-akwado ndị na-eyi ọha egwu - Fayose April 25, 2021
Ọtụtụ ndị nnọchi anya APC egosila mmasị ha ịbanye na PDP na 2023, ka Elumelu, Onye Isi Nta na-ekwu. April 30, 2021
Ndi PDP no na nsogbu, ebe ndi mmadu iri n’abuo na-akwado maka ogu banyere zon Nwere ike 29, 2021
Tags:Alhaji, anyanwu, ayo fayose, ayodele, ayodele fayose, babalola, fayose, lere olayinka, makinde, olayinka, ortom, otunba, na-egwu egwu na gallery, prince uche Secondus, samuel ortom, senator samuel anyanwu, seyi makinde, uche nke abụọ